နိုငျငံတကာသတငျး Archives - MM Live News
တဈနာရီလြှငျ ၉၁ မိုငျခနျ့ရှိသော ဒငျးနဈဈ မုနျတိုငျးတိုကျခတျသဖွငျ့ ဗွိတိနျတှငျ ရကွေီးရလြှေံမှုမြား နိုငျငံတဈဝနျးဖွဈပျေါ
February 17, 2020 MM Live News
ဗြိတိန်တွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ နိုင်ငံတစ်ဝန်းဖြစ်ပေါ် လန်ဒန်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၇ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၉၁ မိုင်ခန့်ရှိသော ဒင်းနစ်စ် မုန်တိုင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် တိုက်ခတ်သဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီး စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်စလုံးတွင်ပင် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဒေသပေါင်း ရာကျော်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီး ဘရိုက်တန်ဒေသတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့သည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိန်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်သာမက စကောတလန်နှင့် ကွန်းဝဲလ်ပြည်နယ်တို့တွင်ပါ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၆ ရက်အထိ ဝေလပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ဆဲဖြစ်သည်။ ဝေလပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မြစ်တစ်ခုအတွင်းတွင်လည်း အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းမျောပါနေသည်ကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဒဏ်ရာရသေဆုံးမှုတို့ကို အတိအကျမသိရသေးပဲ၊ […]
ခဈြသူမြားနမှေ့ာ ခြောကလကျမစားရလို့လား ? အစားလှနျလို့လား ?
February 14, 2020 MM Live News
ချစ်သူများနေ့မှာ ချောကလက်မစားရလို့လား ? အစားလွန်လို့လား ? ဘာလားမသိပါဘူး ၊ ချစ်သူချင်းစကားများရာကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ပြီး သတ်သေမှုဖြစ်.. ဘန်ကောက်မြို့ ဟွေ့ခွမ်မြို့နယ် ပရာချာအူထစ် – လမ်း ၂၀ တွင် ချစ်သူများနေ့ တွင် အလုပ်လက်မဲ့ကိစ္စကနေ ချစ်သူချင်းစကားများစိတ်ကောက်ရာမှ … နှစ်ယောက်စလုံးမိမိကိုယ်မိမိမီးရှို့သတ်သေဘို့ကောင်လေးကအတင်းပြောပြီး သတ်သေမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကောင်မလေးကအတင်းရုန်းကန်သဖြင့် ဒဏ်ရာဘဲရရှိခဲ့တယ်…။ချစ်သူကောင်လေးသေဆုံးမှုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းကနဦးသတင်းရရှိ ။ #ချောကလက်တွေကြည့်စားကြ….#ထန်းလျက်စားတာကျမ္မာရေးနဲ့ညီတယ်….။SiThu Maung / Photo Crd [Unicode] ခဈြသူမြားနမှေ့ာ ခြောကလကျမစားရလို့လား ? အစားလှနျလို့လား ? ဘာလားမသိပါဘူး ၊ ခဈြသူခငျြးစကားမြားရာကနေ ကိုယျ့ကိုယျကို မီးရှို့ပွီး သတျသမှေုဖွဈ.. ဘနျကောကျမွို့ ဟှခှေ့မျမွို့နယျ ပရာခြာအူထဈ – လမျး ၂၀ တှငျ ခဈြသူမြားနေ့ တှငျ […]
တူရကီမှာ ပွငျးထနျတဲ့ ငလငျြလှုပျ အပွီး မွထေဲ ကနေ အနီရောငျ ရမြေားစီးဆငျးလာတဲ့ (ရုပျသံ)
တူရကီမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်လှုပ်အပြီး မြေထဲကနေ သွေးချောင်းရေစီးဆင်းလာ ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တူရကီငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ၄၀နီးပါးရှိခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၆၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်… အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို အရေးပေါ်ကုသပေးလျက်ရှိပြီး ငလျင်ကြောင့် နေအိမ်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေကိုလည်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ပေါင်း အကြိမ်၇၀၀ကျော်လှုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ထူးဆန်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာကတော့ မြို့ထဲမှာ ရေတွေက သွေးရောင်အဖြစ်ပြောင်းပြီးစီးဆင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို လူတော်တော်များများကထိတ်လန့်နေကြပြီး ဒါဟာ တစ်ခုခုကိုအတိတ်နမိတ်ပေးနေတာလားလို့ စိုးထိတ်နေသူများရှိသူများရှိသလို မကောင်းတဲ့အရာတွေကို တားမြစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြသူများလည်းရှိပါတယ်။ Source-Setiwan / Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan ) unicode တူရကီမှာ ပွငျးထနျတဲ့ ငလငျြလှုပျအပွီး မွထေဲကနေ သှေးခြောငျးရစေီးဆငျးလာ ဇနျနဝါရီလအတှငျးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ တူရကီငလငျြကွောငျ့ သဆေုံးသူ၄၀နီးပါးရှိခဲ့ပွီး […]
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု အရေးပျေါ အခွအေနေ အဖွဈ WHO ကွညော….
January 31, 2020 MM Live News
WHO က ဝူဟန်ရောဂါကိုနိုင်ငံတကာသို့အရေးပေါ် ကြေငြာ ( မူရင်းဘာသာပြန်အတိုင်းဖော်ပြသည် ) ဂျီနီဗာ – ၂၀၂၀ ဇန် ၃၁ ရက် ( ဝ၃:၉၅ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့ ၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှကူးစက်ပြန့်ပွားနေသော coronavirus ကူးစက်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လူပေါင်း ၁၇၀ ကိုသေစေခဲ့သောရောဂါ၏အန္တရာယ်ကို အစပိုင်းတွင်လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဂျနီဗာအခြေစိုက်ကမ္ဘာ့ကျမ္မာရေးအဖွဲ့က အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Tedros ကနိုင်ငံတကာသို့အရေးပေါ်ကြေညာခဲ့သည် ။ WHO ၏အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျန်းမာရေးစနစ်အားနည်းသောအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ပြန့်ပွားနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုဂျီနီဗာ၌ပြောကြားခဲ့သည်။ငါတို့ရှိသမျှသည်ထပ်မံပျံ့နှံ့စေရန်ကန့်သတ်ရန်ယခုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရမည်။ Tedros ကပြောကြားရာတွင်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ခြင်းများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်မလိုအပ်ဘဲဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအခြားနိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်တော်များများကနိုင်ငံသားများအားတရုတ်နိုင်ငံသို့မသွားရန်တိုက်တွန်းထားပြီးအချို့မှာမူတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Wuhan မှခရီးသွားများအား ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခြားသူတစ် ဦး မှဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ၏ဇနီး Wuhan မြို့သို့သွားရောက်ခဲ့သောဇနီးထံမှရောဂါကူးစက်ခံထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေကြောင်းလိုင်းများသည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လေကြောင်းလိုင်းများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးကြာသပတေးနေ့တွင်လည်း ထပ်မံ၍ […]